Intel Inozivisa New Wave yeOptane uye 3D NAND SSDs
Nhasi Intel iri kuzivisa zvidzoreso kune mazhinji maSDD zvigadzirwa zvemitsara. Zvigadzirwa zvavo zvinoenderana ne3D NAND zviri kuvandudzwa kushandisa Intel's 144-layer QLC uye TLC NAND. Padivi reOptane rebhizinesi, isu tine zvakadzama kutsanangurwa kwechigadzirwa chekutanga kushandisa chechipiri-chizvarwa 3D XPoint ndangariro, uye yakagadziridzwa Optane Memory caching mhinduro yevatengi maPC. Intel yakaratidzawo zita rekodhi yechitatu-chizvarwa Optane inoramba ichingorangarira mamodule, ayo achange achivhura pamwe neSapphire Rapids Xeon processor.
SSD 670p - Mutengi / Mutengi NVMe, 144L QLC
Optane SSD P5800X - Datacenter NVMe, Yechipiri-gen 3D XPoint
Optane Ndangariro H20 - Mutengi NVMe, 144L QLC + 3D XPoint
Optane Kuramba Kurangarira 300 Series: Crow Pass - 3D XPoint DIMM
Zvimwe zvezvigadzirwa izvi zvakatotanga kutumira uye zviri kuvhurwa zviri pamutemo mwedzi uno, nepo zvimwe zviri kungoziviswa nhasi uye zvichange zviri kuvhurwa muna 2021, iine zvizere zvirevo nemitengo zvakaziviswa padhuze nekutanga.
144L 3D NAND YeDatacenter SSDs
Zviziviso zviviri zvekutanga zveSSD zvinogadziriswazve kuIntel's datacenter SSDs uchishandisa 3D NAND. Iyo nyowani D7-P5510 inoshandisa 144L 3D TLC NAND uye ndiye anotsiva kune iyo D7-P5500 iyo inoshandisa 96L TLC. Sezvo iyo P5500 yaive chigadzirwa cheOEM-chete panzvimbo pekuparadzirwa kwakawanda kuburikidza negero, iyo P5510 ichashandawo seanotsiva iyo P4510 yechikamu chevatengi base. Intel haina kuzivisa iyo 144L kutsiva iyo D7-P5600, iyo yepamusoro-inopfuura yekufungidzira mubatsiri kune iyo P5500.
Uchishandisa Intel's 144L QLC NAND ndiyo nyowani D5-P5316 SSDs mu15.36 TB uye 30.72 TB masimba mune chero U.2 kana E1.L mafomu mafomu. Iyo E1.L vhezheni inobvumira Intel kuzadzisa iyo yekutanga chinangwa che "Mutongi" fomu chinhu nekugonesa 1PB yekuchengetedza mune 1U server. Sezvo iyo P5316 iri kutsiva yekare P4326 (64L QLC uye PCIe gen3), iko kusimudzira kwakanyanya pamusoro peakaitangira pane iyo TLC-based P5510 iri. Kunze kwekuunzwa kweIntel-yechitatu-chizvarwa bhizinesi NVMe SSD controller kune yavo QLC yechigadzirwa mutsetse, chinonyanya kukosha shanduko iyo P5316 inounza shanduko huru mune mashandiro eiyo Flash Shanduro Layer. Iyo P5316 inogonesa iyo 16x kudzikiswa muDRAM nekushandura iyo SSD's Flash Dudziro Layer kuti ishande ne granularity ye64kB pane 4kB. Isu takaona mamwe mashoma emabhizinesi SSD anoita iyi shanduko, senge Western Dhijitari Ultrastar DC SN340, iyo inoshandisa 32kB FTL granularity. Kuchengetedzwa kweDRAM kweakaomeswa-akakwenenzverwa FTL anobatsira kuita yakakwira-masimba maSDD anodhura, asi zvichikanganisa kukuvadza kwakanyanya mashandiro uye kuwedzera kunyora kukwidziridzwa kwediki diki saizi inonyora inonyora. Izvo zvakajairika muindasitiri ndeye kutora NVMe Zoned Mazita Mahara kune madhiraivhu akadaro, kudzivirira zvisina kujairika anonyora zvese pane kuvimba neyakagamuchirwa software kuti uchenjere nezve kuburitsa diki-block IOs. Nekudaro, Intel inoita kunge isiri kugadzirira kutora nzira iyi parizvino.
Ese ari maviri TLC-based P5510 uye QLC-based P5316 inoshandisa imwecheteyo chikuva chikuva seIntel's mamwe maP5000-akateedzana SSDs akaziviswa kutanga kwegore rino. Iwo madhiraivha akaunza Intel's yechitatu-chizvarwa bhizinesi NVMe SSD controller, yavo yekutanga kutsigira PCIe 4.0. Iwo matsva e144L anotyaira haanyatso pusha mashandiro kana chimiro chakamiswazve, asi ichave ichiwanika zvakanyanya uye inofanira kunge yakachipa pane iyo 96L dhiraivha. Iyo TLC-yakavakirwa P5510 yakatove yakatemerwa kune vatengi kuti vakwanise uye ichave ichiendesa kune mari pakupera kwegore rino. Iyo QLC-yakavakirwa P5316 iri sampling uye ichave ichiwanikwa mune yekutanga hafu ye2021.
SSD 670p: 144L QLC YeVatengi
Kuenderera kumberi kune mutengi SSD bhizinesi, Intel ichave ichiunza iyo 670p QLC NVMe SSD mukota yekutanga ya2021. Izvi zvinotevera mumakwara e660p ne665p neimwe yekuvandudza kune nyowani 3D QLC NAND, uye zvakare inounza SSD mutungamiriri kugadzirisa kune ino chigadzirwa mutsara. Nekudaro, ichiri chete PCIe gen3 chigadzirwa. Intel ichave ichidzoreredza iyo 512GB yekugona iyo yanga isipo kubva ku665p, asi ivo havasati vachiwedzera masimba kupfuura 2TB. Yakadzama maitiro ekuita uye mitengo ichagoverwa padyo padyo ne670p kuvhurwa.
Intel iri kugadzira kugadzirisa kune yakasimba-saizi SLC caching maitiro neiyo nyowani 670p. Nepo hukuru hwepamusoro uye hushoma SLC cache saizi isiri kuchinja, Intel yakwanisa kugadzirisa saizi cache iyo ichave ichiwanikwa kune isina kukwana-izere dhiraivha: Hafu yakazara 670p icharamba iine inenge yakanyanya SLC cache saizi inowanikwa, uye hushoma saizi cache haizosvitswe kusvikira dhiraivha yapfuura 85% izere. Izvi pamwe hazvizoshandure chero chinhu chemabhenji mabhureki anonyora achienderera kusvikira cache yapera uye madonhwe ekuita, asi zvinobatsira mashandisirwo epasirese-nyika uko kunyorera kunouya kuputika.
Optane SSD P5800X: Alder Stream Inosvika
Intel yakamirirwa kwenguva refu-yechipiri-chizvarwa Optane bhizinesi SSD, yakanyorwa zita rekuti Alder Stream, iri pakupedzisira kutumira seP5800X. Ichi ndicho chigadzirwa chekutanga kushandisa yechipiri-chizvarwa 3D XPoint ndangariro, uye zvakare inoratidzira yakagadziridzwa mutungamiriri kutsigira PCIe 4.0. Iyo P5800X inosundira iyo miganho yekuita kunowanikwa kubva kuPCIe 4.0 x4 interface ine yakateedzana kuverenga, kuverenga kwakasarudzika uye kusarongeka kunyorera zvese zvakatsigirwa paakawanda kana zvishoma mutsetse kumhanya, uye zvakateedzana zvinonyora zvishoma zvishoma pa6.2 GB / s. Uye nepo 1.5M IOPS yemamwe maverengero akaverengwa kana asina kurongwa anonyora atove anonakidza kwazvo, iyo P5800X inogona kutorova 1.8M IOPS pamusanganiswa 70/30 - zvinokwanisika nekuti PCIe yakazara-duplex interface. Intel yaitawo optimizations kune imwechete-chikamu 512-byte zvisina kujairika kuverenga, izvo zvinogona kurova 4.6M IOPS. (Flash-based SSDs kazhinji haigone kupa chero yakakwira IOPS ye512B inoverengwa kupfuura 4kB inoverengwa, uye vazhinji vanotoita zvakadzikira kuita kweiyo diki block IO.)
Yekutanga-chizvarwa Optane DC P4800X yakatangwa ne30 DWPD yekunyora kutsungirira chiyero, yakazowedzerwa kusvika ku60 DWPD. Iyo nyowani P5800X inowedzera inowedzera kunyora kutsungirira ku100 DWPD. Unyanzvi hunotangira kubva ku400GB kusvika ku3.2TB.
Optane Ndangariro H20
Mutengi / mutengi anotarisa chikamu cheIntel's Optane chigadzirwa chemhuri chakadzikira zvakanyanya. Ivo havasisiri kuita Optane M.2 SSDs yekushandisa seyekutanga kuchengetedza kana cache cache, uye hapachina kutaurwa parizvino kubva kune anofarira-anotora chinotora cheP5800X kutsiva Optane SSD 900P uye 905P (kunyangwe Intel ikaronga yakadaro chigadzirwa, ivo havakwanise kuzvizivisa kusvikira vaendesa desktop desktop inotsigira PCIe 4.0). Mutengi chete Optane chigadzirwa Intel anga achitaura nezvazvino ndiyo Optane Ndangariro H10 hybrid drive ine QLC NVMe SSD uye Optane SSD pane imwechete M.2 kadhi. Anomutsiva ave munzira: iyo Optane Memory H20 yakarongerwa Q2 2021, ichibatanidza zvidzoreso kudivi reQLC izvo zvingangotaridza zvadzokororo zve670p, uye mutungamiriri mutsva paOptane hafu yekutyaira. Iyo H20 icharamba iri PCIe gen3 mhinduro, saka isu tichaenderera mberi nekuona mashandiro eNAND divi rakamanikidzwa nekungowana chete nzira mbiri dzePCIe. Intel iri kubhowa kumusoro kwepuratifomu zvinodikanwa: yechizvarwa chegumi nechimwe Core U-dzakateedzana nharembozha uye 11-dzakateedzana chipset, uye Intel RST mutyairi vhezheni 500 kana gare gare. Pakatangwa H18.1, Intel yakanga yaisa hwaro hwekutsigira pamapuratifomu edesktop, asi kuyedza uku kwakadonhedzwa apo iyo H10 ikava chigadzirwa cheOEM-chete. Iyo H10 ndeye mobile-yakatarisana neOEM-chete chikamu kubva pakutanga, saka chikuva chinowirirana zvinodiwa hazvisi zvakanyanya senge nyaya sezvaizoita kune yekutengesa SSD.
Iyo Optane Memory H20 ichave ichiwanikwa ne512GB kana 1TB yeQLC NAND flash memory, imwe neimwe yakapetwa ne32GB ye3D XPoint memory.
Optane Kuramba Kurangarira 300 Series: Crow Pass
Intel's Optane Persistent Memory zvigadzirwa (3D XPoint mune DIMM fomu chinhu) parizvino iri yechipiri chizvarwa 200 dzakateerana Barlow Pass inotsigirwa neCooper Lake uye iri kuuya Ice Lake Xeon mapuratifomu. Iwo mazana maviri akateedzana Optane Persistent Memory module achiri kushandisa yekutanga-chizvarwa 200D XPoint ndangariro. Intel ikozvino yaburitsa pachena kuti chizvarwa chinotevera pamepu chakadomwa zita reCrow Pass, iyo ingangozivikanwa seye 3 akateedzana. Iwo maCrow Pass mamodule achavhurwa kuti ashandiswe neIntel's Sapphire Rapids Xeon processor. Izvo zvinotarisirwa kushandisa DDR300 memory, saka Crow Pass ichave huru yekugadzirisa kune iyo interface yeOptane Persistent Memory. Crow Pass inofanirwa zvakare kuunza yechipiri-chizvarwa 5D XPoint ndangariro kune iyo DIMM fomu chinhu, saka zvese izvi zvinogona kunge zvichinyanya kukosha kudzoresa pane diki diki diki inovandudzwa neiyo 3 akateedzana.
Caching Uye Tiering: Intel Optane Memory H20 uye Enmotus FuzeDrive SSD Yakaongororwa
Iyo Intel Optane SSD DC P4800X (375GB) Ongororo: Kuedzwa 3D XPoint Performance
Iyo Intel Optane Memory (SSD) Kutarisa: 32GB ye Kaby Lake Caching
Iyo Intel Optane SSD 800p (58GB & 118GB) Ongororo: Almost Iyo Yakakodzera Saizi
Sabrent Rocket Q4 uye Corsair MP600 CORE NVMe SSDs Yakaongororwa: PCIe 4.0 ine QLC
Iyo Toshiba XG5 (1TB) SSD Ongororo
Iyo Samsung SSD 980 (500GB & 1TB) Ongororo: Samsung Kupinda NVMe